Inona avy ireo akanjo ba any Vuelta? - Jersey
Tena > Jersey > White jersey vuelta - mamaly ireo fanontaniana
White jersey vuelta - mamaly ireo fanontaniana
Inona avy ireo akanjo ba any Vuelta?
Ny mpitondra ankapobeny amin'izao fotoana izao dia manao menajersey, na dia teo aza ny 'Maillot amarillo' (Mavojersey) ary ny 'Jerseyde Oro '(Volamenajersey) ny Espaniola mitovy amin'ny mavojerseyan'ny Tour de France.
Misy akanjo marobe eto amin'ny tontolon'ny bisikileta, saingy azonao atao ve ny miantso azy rehetra? Fantatrao ve fa pataloha jeans Amalia Rosa anao manokana aho? Amin'ity lahatsoratra ity dia hitety anao aho amin'ny sasany amin'ireo akanjo malaza indrindra amin'ny tontolon'ny bisikileta, inona no soloin'izy ireo ary aiza? Izy ireo dia nanomboka tamin'ny nanombohana anay niaraka tamin'ny akanjo lava bisikileta malaza indrindra na dia ireo tsy mpitaingina bisikileta aza dia hahafantatra fa ny mpitarika ny Tour de France dia hanao ilay akanjo mavomavo. Akanjo ity izay nofinofisin'ireo mpitaingina bisikileta matihanina sy natokany ho an'ny Tour de France Leading Jersey ary toy ny mahazatra, ny ankamaroan'ny hazakazaka lehibe dia azo, toy ireo sokajy jersey maro hafa. Izany dia tamin'ny 1919, rehefa ny Tour deFrance, taorian'ny fiatoana naharitra efa-taona, dia nankalaza ny fiverenan'ny roa ampahatelony tamin'ny vanim-potoana 5560 kilometatra sy ny dingana 325 kilometatra, nanapa-kevitra ny talen'ny hazakazaka Onritu Fitsarana fa ny mpitarika ny hazakazaka Tsy maintsy niavaka tamin'ny mpifaninana hafa izy ary talohan'ny nanombohana dingana roa tamin'ny 18 Jolay 1919, i Christophe avy any France dia nanao ny akanjo mavomavo voalohany, fa tamin'izany fotoana izany dia fomba iray fotsiny hanamarihana ara-batana ilay hazakazaka talen-tsekoly, saingy ity fotoana ity dia nivadika ho iray amin'ireo akanjo lava bisikileta malaza indrindra, saingy ny antony nisafidianana ny loko mavo satria loko mpanohana ny gazety hitazonana ireo andro ireo fa tsy ny akanjo ihany no anananan'ireo ekipa mavo ireo aroloha bisikileta mavo sy kojakoja bisikileta rehefa miakanjo akanjo mavo ny iray amin'ny mpitaingina azy, ilay zazalahy Jersey Insight no ahafantarana azy manaraka ary raha ny fahitako azy ny tena milay dia ilay akanjo polkadot, fantatra koa amin'ny hoe King of the Mountains Jersey isaky ny fiakarana manan-danja rehetra amin'ny ny fizahan-tany dia misy teboka eo an-tampon'ny tampony, saingy arakaraka ny maha sarotra ny fiakarana no ahazoana isa bebe kokoa izay ahazoana isa betsaka indrindra amin'ny fiandohan'ny andro amin'ny maraim-be dia efa nanomboka ny 1933 ny fanamian'ny tondra-tenda ny fanamiana an-tendrombohitra fa mbola tsy nisy jersey hatramin'ny 1975 ny akanjo fotsy dia nomena polkadots mena fa maninona ny teboka polka no tsy misy ifandraisany amin'i van teenswell intsony dia noho ny iray amin'ireo mpanohana schokoladenpool ary hosaronany teboka polka ny bara sôkôlà ary avy eo tonga ilay jersey polka dot manaraka ity kely maitso ity Ny isa dia ilay akanjo maintso fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Mein Over tamin'ny Tour deFrance tamin'ny 1952, ny gadona fandikana haingana kokoa azon'ny margin lehibe toy izany dia nijanona avokoa ka nahatonga ny fandrisihana fanampiny ny mpikarakara nampiditra ny jersey maintso sy ny jersey sprint toa ny polkadot -Ny mpitaingin-tsoavaly Jersey dia nanangona pirinty teny amin'ilay zotra, fa tsy tany an-tendrombohitra tamin'ity indray mitoraka ity nandritra ny sprinter antonony, fa teo kosa dia nahazo isa ny valiny tamin'ny famaranana, ka nanapa-kevitra ny mpikarakara mankalazà ny tsingerintaona faha-50 tamin'ny 1953 niaraka tamin'ny akanjo lava sy loko miloko maitso, azo inoana fa iray tamin'ireo mpanohana ara-dalàna ilay fitsidihana antsoina hoe Sardinia The White Jersey, fantatra ihany koa amin'ny hoe MayaBlanc, no tena akanjo mavomavo, fa ho an'ireo tanora mpitaingina azy dia ity no akanjo lava ho an'ny laharana voalohany ambanin'ny 25 santimetatra ny fanasokajiana ankapobeny Tamin'ny taona 1975 no nampiasana voalohany ny akanjo, fa ho an'ireo mpitaingina ihany tao anatin'izay telo taona voalohany tamin'ny hazakaza-piadiana Professional, avy eo tamin'ny 1983 dia novana ho mpamily voalohany ihany no afaka. , ary tamin'ny taona 1985 dia natolotry ny mpamily latsaky ny 25 ny fanamiana fanamiana nanomboka ny taona 1989 ka hatramin'ny 1999, fa tamin'ny taona 2000 dia niverina izy io ary efa nisy hatrizay ny ekipa mpitarika ny Giro themaglia rosa Izany dia mitovy amin'ny akanjo lava mavo any ambony, fa mavokely izy io ary ny loko mavokely dia avy amin'ny gazety fanatanjahan-tena italiana izay mihazakazaka ny hazakazaka taratasy mavokely dia novatsiana vola ary natao pirinty mifanohitra amin'ny akanjo rehetra amin'ny jubilation dia mbola nitovy ihany ny akanjo mavokely. e no nahazoana azy voalohany tao amin'ny Giro ny jersey volomparasy dia ny jersey sprinter indray mitovy amin'ny jersey maitso ao amin'ny Tour de France fa volomparasy tamin'ny 1967 no nampidirina ny jersey sprint, jersey mena io tamin'izany fotoana izany ary tamin'ny 1969 ny mpikarakara dia nanapa-kevitra ny handoko ny volomparasy volomparasy ary volomparasy hatramin'ny taona 2010 raha nanapa-kevitra ny mpikarakara ny hanova azy io amin'ny jersey mena fa tamin'ny 2017 dia niova izy ireo Na izany aza, tao anaty lavajesse iray indray ilay jersey manga, fantatra ihany koa amin'ny marika Lea Asura, no lobaka tsara indrindra amin'ny fiakarana, izay mitovy nefa tsy mitovy amin'ny akanjo polkaDot an'ny Tour de France Ity no lobaka an-tendrombohitra ho an'ny Giro 1974, ny jersey no voalohany nomena loka ary tamin'izany dia maitso hatramin'ny 2012 raha ny mpanohana ny ny fanasokajiana Jersey Bangkamedal Alaun, banky italiana, dia nanavao ny mpanohana ary lasa manga indray dia tsy toy izany foana, rehefa nanomboka ny hazakazaka tamin'ny 1931 dia volomboasary ary avy eo nivadika fotsy nandritra ny herintaona tamin'ny 1941, ary avy eo izaho navadika ho ora nge tamin'ny 1955, avy eo nivadika mavo mitovy loko toy ny Tour de France izy ary nijanona mavo foana hatramin'ny taona 1999 ankoatra ny tamin'ny 1977 rehefa nivadika volomboasary izy, ny jersey mena dia noraisina tamin'ny 2010, ny jirika avana jersey manokana miavaka amin'ny tontolon'ny bisikileta ary ny iray izay mpitaingina bisikileta matihanina maro no manonofinofy hahazo jersey izay homena ilay mpitaingina izay mandresy amin'ny hazakazaka tompon-daka eran-tany amin'ny taranja bisikileta marobe tsy mitovy amin'ireo akanjo itondra mandritra ny hazakazaka, ny avana ny akanjo lava dia tonta mandavantaona ary mandra-pahatongan'ny tompon-daka manaraka sy ireo mpandresy amin'ny hazakazaka dia afaka misafidy ny hanao tadin-trandrika amin'ny akanjon'izy ireo na eo amin'ny vozon'akanjo na amin'ny akanjo lava mavomavo teraka miaraka amin'ny fandrarana UCI hatrany ambany ka hatrany, fa ny loko mavo maitso mainty mena manga manga ireo loko ireo dia miseho amin'ny peratra olympika ihany koa ny mistery maro manodidina ny fiandohan'ny akanjo avana, fa ny loko tany am-boalohany dia nataon'ny mpanorina ny mo olimpika vement Baron Pierre de Coubertin namboarina Okay tsy Jersey ity, ity dia ampahany tena manan-danja amin'ny Tour de France ity izao dia loka tsy ofisialy omena ny mpitaingina farany.
Amin'ny ankapobeny, ny anarana dia avy amin'ny lanterne mena izay nahantona tao ambadiky ny kalesy izay tadiavin'ilay mpiasan'ny fiarandalamby raha toa ka misaraka ny lamasinina hafa. Antenainay fa nankafizinao ity fihaonan'ny sasany amin'ny akanjo malaza indrindra amin'ny tontolon'ny bisikileta ity, fa inona ny akanjo itiavanao azy? Maninona ianao no tsy mandeha amin'ny app gcn ary milaza hoe inona no akanjo manaingo bisikileta tsara indrindra ary maninona ary avy eo no nipoitra ny teboka polka hmm hmm tamin'ny taona 1975 no nampiasaina voalohany ny jersey fa ho an'ny mpitaingina ihany tao anatin'ny telo taona voalohany hazakazaka matihanina, avy eo 1973 1983
Inona no akanjo baoty fotsy amin'ny bisikileta?
nyjersey fotsy, na maillot blanc, mankany amin'ny mpitarika General Classification izay 25 taona no ho miakatra (amin'ny 1 Janoary amin'ny taom-pilalaovana nomena). Raha tsorina, dia mankany amin'ny tanora mpitaingina tanora tsara indrindra miaraka amin'ny fotoana farany ambany indrindra. Ho an'ny tanora, be zotom-po rehetra amin'ny hazakazaka, mandresy nyjersey fotsydia toy ny mavo mandresy.iraika amby roapolo . 2021.
Iza no nomena ny akanjo baoty fotsy?
Tour de Franceakanjo lava:fotsy- Mpitondra fanasokajiana tanora tsara indrindra. Ny mampiavaka indrindra ny fanasokajiana rehetraakanjo lava- tsotra izanyfotsy- dianahazoho an'ny mpitaingina latsaky ny 26 taona nahavita ny Tour de France tao anatin'ny fotoana fohy indrindra. izanyjerseydia natomboka tamin'ny taona 1975.
Fa maninona no fotsy ny akanjo lava fotsy?
Ny 2020jersey fotsy, nanaovan'i Tadej Poga? ar nandritra ny fotoam-pitsarana. Ny sokajy tanora mpitaingina dia fifaninanana faharoa amin'ny Tour de France, izay nanomboka tamin'ny 1975. Tsy misy ny taona 1989 ka hatramin'ny 1999, ny mpitarika ny fanasokajiana tanora dia mitafyjersey fotsy(Anglisy: jersey fotsy).
Inona no dikan'ny akanjo lava maitso ao amin'ny Vuelta?
Amin'ny hazakazaka bisikileta eny an-dalana (ohatra: hazakazaka fifaninanana Grand Tour) nyjersey maitsodia hazakazaka miavakajerseymitafy ny farany farany maharitra indrindra amin'ny fifaninanana. Nanomboka ny taona 2009, nyMiverenaa Espa? a koa efa nampiasa nyjersey maitsonyhaneho izanyny mpitarika ny fifaninanana isa.
Nahoana araka ny eritreritrao no manao jirobe mena ny mpitondra?
Akanjo menatoy ny fanasokajiana ny tendrombohitrampitarika
nylobaka menamidika koa ny fanasokajiana ny tendrombohitrampitarikaary mpandresy amin'ny hazakazaka an-tsehatra maromaro, ao anatin'izany: ParisNice. Fitsidihana an'i Missouri.
Fa maninona no mainty ny bisikileta?
Ny fahitana eny an-dalana dia iray amin'ireo fepetra fiarovana lehibe indrindra azonao raisina ahazakazaka am-bisikileta. Nefa mitainginamaintymaikanotsy misy manampy an'izany. Ny mpitaingina sasany dia manontany ny antony tokony hanaovany izanyAzamiasa ny mpamily ho azy ireo amin'ny fanaovana fiezahana fanampiny ho hita raha tsy mahasosotra ny mpamily mijery.
fitomboan'ny hozatra ibuprofen
Mazava tsara ve ny akanjo baoty fotsy?
Haavo avo indrindraakanjo lavadia somaryJEREO NY-ny alalan '. Fifaninanana hazakazakaakanjo lavaasehoy ny biby na dia tsy izany azaJEREO NY-ny alalan 'fotsiny noho ny tery tery. Mety hahazo baselayer ianao raha tianao, nefa tsy hanafina na inona na inona izy ireo.
Fotsy foana ve ireo akanjo ba Away?
Nanomboka ny taona 2001 dia nifidy ny hitafy izy ireolobaka fotsyary burgundyakanjo lavamitovy amin'ny lalao an-tranony, saingy mbola manao ihanyfotsymanohitra ny Cowboys. Rehefa niverina i Gibbs tamin'ny 2004 ka hatramin'ny 2007, dia nanao akanjo izy ireofotsyao an-trano manokana. Tamin'ny 2007, nanao afotsyfanarianajersey.
Firy ny mpandresy Super Bowl nanao fotsy?
Nandritra ny 54 voalohanySuper Bowls, ny ekipa manaofotsyakanjo ba dia 34-20 (. 630%), ao anatin'izany ny 13-3 amin'ny 16 faranySuper Bowls(jereo ny tabilao etsy ambany). Nanomboka ny vanim-potoana io tamin'ny vanim-potoana 2004, rehefa resin'i Tom Brady's Patriots i Andy Reid's Eagles taoSuper Bowl39.07.02.2021
Inona avy ireo akanjo ba an'ny Vuelta a Espana?
Misy lobaka efatra ao amin'ny Vuelta a España: teboka polka mena, maitso, manga ary fotsy. Tsy toy ny Tour izay nanandrana nanamboatra ny fizarana isa mba hanomezana mpandresy miavaka ny Vuelta dia mahita fifandraisana lehibe izay mety hitarika fifaninanana hafa ny mpitarika amin'ny fifaninanana iray ary mety ho izy efatra miaraka.
Iza no mpandresy amin'ny akanjo fotsy?
Tamin'ny 1941, ny akanjo fotsy Vuelta a España dia natao ho an'ny mpitarika sy mpandresy amin'ny ankapobeny amin'ny sokajy Jeneraly. Ny Tour of the Basque Country dia manome jersey fotsy ho an'ny mpitarika sy mpandresy amin'ny sokajy Points.
Iza no mahazo ny akanjo lava fotsy ao amin'ny Tour de France?
Hazakazaka am-bisikileta marobe no manome jersey fotsy hanondroana ny mpitondra ankehitriny sy ny mpandresy amin'ny fifaninanana iray, na hanondroana ny tanora mpitaingina tsara indrindra amin'ny hazakazaka. Ny tena malaza amin'izany dia ny Tour de France, izay iantsoana ny maillot ho maillot blanc ary omena ny soavaly mpitaingina tsara indrindra eo ambanin'ny 26 taona.